Myanmar Gays Heaven: ပျင်းလို့လက်ကစားလိုက်တဲ့ ကိုကျော်မျိုး................
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:44 AM
hm June 18, 2014 at 1:07 AM
နေပြည်တော်က t တစ်ယောက်လောက်အလိုရှိသည်။စိတ်ဝင်စားသူ mail ထားခဲ့ပါ
Anonymous July 22, 2014 at 3:42 PM
Anonymous August 16, 2014 at 1:10 AM
saw khon Naung August 18, 2014 at 11:12 PM
Anonymous October 9, 2014 at 1:31 AM
ygn295@gmailပါ။ top များသာ add ပေးပါ။
Anonymous October 25, 2014 at 2:24 AM
Anonymous October 27, 2014 at 8:13 AM
Jonathan November 12, 2014 at 9:42 AM
Than Zaw Oo December 25, 2014 at 9:18 PM
ဖုန်း 09 8306767 ကို ဆက်သွယ်ပါ
လက်ကစားတဲ့သူရဲ့ph no လိုချင်တယ်
hm June 18, 2014 at 9:43 AM
hm June 18, 2014 at 9:45 AM
Anonymous June 22, 2014 at 5:29 PM
09420266286 aung lay pr
maung oo July 3, 2014 at 3:20 PM
I am top, if you want to content me, send mail to maungootum@gmail.com.:-) :-)
Zin Kowin July 20, 2014 at 2:28 AM
Anonymous July 31, 2014 at 4:16 AM
ခံချင် ရင် ဆက် သွယ်ပါ
Anonymous August 1, 2014 at 8:59 AM
Anonymous July 31, 2014 at 5:13 AM
ကျွန်တော်ပုံတွေသဘောကျလားဖုန်းခေါ်ရင် ရပါတယ်09402709447ကိုဆက်လိုက်ပါ
အရမ်းလီးတောင်နေတယ်ထုရတာလက်ညောင်းတယ်ခံချင် ရင် ထားဝယ်လာခဲ့ပါ428168958ကျော်စွာ
Anonymous July 31, 2014 at 7:39 PM
Anonymous August 1, 2014 at 1:46 AM
I am homo .I needaboyfriend.I am 19 year old.I am cute &handsom..
contact my gmail lovinginparadise@gmail.com
Anonymous September 30, 2014 at 11:48 PM
where are you?Are you bot?
Anonymous August 1, 2014 at 1:57 AM
Call me 09402703663
Anonymous August 1, 2014 at 8:53 AM
hotti boy November 19, 2014 at 9:37 PM
Anonymous August 1, 2014 at 8:54 AM
mdyသားနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ကျွန်ကပြည်ကြီးတံခွန်ကပါviberက နေ ပြောချင် ပါတယ် mantomanပေါ့
charlie August 10, 2014 at 7:56 PM
၀၉၉၇၂၅၇၅၆၈ hlaung22898@gmail.com ကိုဆက်သွယ်
Anonymous August 19, 2014 at 8:56 AM
ko phone August 31, 2014 at 1:28 PM
'ပြည်ကြီးတံခွန်သား ငါလဲ ပြည်ကြီးတံခွန်ပဲ ph noပေး
Anonymous October 7, 2014 at 9:08 AM
ပြည်​ကြီးတခွန်​သားပါ ခံချင်​ရင်​ o9797158645 viberက​နေ hineedtosexဆိုပြီး ပို့ပါ ဖုန်း​ခေါ်လျှင်​မကိုင်​ပါ
အဖြူအင်္ကျီဝက်ဆင် ထားသည် ဆိုင် ကယ်သမားမေးလိုက်ပါတွေ့ချင် ရင်၁၁နာရီထိရှိပါသည် ကျော်ဇေယျာပါ
သူငယ်ချင်း များအားလုံးဘာလုပ်နေကြလဲလိုင်းပေါ် မတက်ကျဘူးလားပုသိမ်က ကောင်လေး လီးကစုပ်ချင် စရာကောင်းချက်ကြည့်လိုက်လေး
tarr yarr August 5, 2014 at 12:57 AM
npt ကပါ tawwinn.civil@gmail
0932353670 sex ဖြစ်ချင်လို့ဆက်သွယ်ပေးပါ မနွဲ့ ရ
sanaythu August 23, 2014 at 8:06 AM
Anonymous August 10, 2014 at 2:24 AM
Htin Lin Aung August 11, 2014 at 5:21 PM
Anonymous August 12, 2014 at 1:40 PM
ygnက top only
Anonymous January 28, 2015 at 8:02 AM
top only ပါ
ygn က ပါ
bottonချစ်သူ တ ယောက်
အလို ရှိ ပါသည်
ချစ် တတ် တဲ့ bottom
များ ဆက် သွယ်ပါ
မှား မှာစိုးလို့ topပါ ၂၅နှစ်ပါ
အမြန် ဆက် သွယ်ပါ
၂၅၀ ၇၅၈ ၆၀၈
Anonymous January 28, 2015 at 7:56 AM
မလေးက ဘယ်သူရှိလည်း ဒိတ်မယ်
thawngno November 27, 2014 at 11:49 AM
saw khon Naung August 18, 2014 at 11:10 PM
saw khon Naung August 18, 2014 at 11:11 PM
top bottom ဆိုတာဘာလဲ ရှင်းပြ​ပေးပါအုံး
Anonymous August 19, 2014 at 12:00 AM
လားရှိူးက အလိုးခံချင်​သူများ ဖုန်းနံပါတ်​ထားခဲ့ပါ အသက်​မကြီးရ မ၀ရ ​ကောင်း​ကောင်းပြုစု​ပေးနိုင်​ရမည်​
Sai Aungminnko August 19, 2014 at 5:30 AM
Homo ချစ်သူများ .
saithiha aung October 18, 2014 at 3:52 PM
chanchan chan August 21, 2014 at 11:06 AM
Anonymous August 27, 2014 at 10:54 AM
မုံရွာကပဲ top ပါ
မုံရွာက လီးကြီးပြီးဖင်​လိုး​ချင်​တဲ့သူရှိရင်​ ​မေးလ်​ ချန်​ထားခဲ့ပါ အသက်​ ၃၀မှ ၄၀ အတွင်းသာ
Anonymous August 22, 2014 at 7:59 PM
လီးအကိုင်ခံချင်တယ် ဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ လီးကြီးသည်
Anonymous August 23, 2014 at 8:17 AM
sanaythu August 23, 2014 at 8:48 AM
Anonymous August 23, 2014 at 5:52 PM
Anonymous August 30, 2014 at 8:59 AM
ko phone August 31, 2014 at 8:47 PM
မန်းလေးကပါ ၃၅နှစ် real man ပါ real man or real boy များပြောနိုင်တယ်
ko phone August 31, 2014 at 8:57 PM
35နစ်ပါ မန်းလေးက man ပါ man များခင်နိုင်တယ်
ko phone August 31, 2014 at 11:50 PM
35years မန်းလေးက real man ပါ reak man များ man to man ဖြစ်ချင်တယ်
ko phone August 31, 2014 at 11:59 PM
35years mandalay i'm real man .i need real man or boy
True Love November 7, 2014 at 2:05 PM
ko phone November 8, 2014 at 11:07 AM
ph noထားခဲ့ဆက်မယ် gmailမရလို့
True Love November 12, 2014 at 11:42 AM
စိတ်ဝင်စားတယ် mail တခုခုထားခဲ့လေအပ်လိုက်
ko phone September 4, 2014 at 1:33 AM
မင်း ph no ဒါမှမဟုတ် gmailထားပေးပါ ဆက်သွယ်မယ် နာမည်လဲတခုခုပြောပါ
Anonymous September 5, 2014 at 7:25 AM
Name ka Htin lin aung
Anonymous September 7, 2014 at 1:23 AM
Anonymous September 8, 2014 at 2:46 PM
moe zatt September 10, 2014 at 12:25 PM
Anonymous September 13, 2014 at 4:58 PM
Anonymous September 14, 2014 at 4:54 AM
နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမှခံချင် သူများဒီမှလီးတောင်နေတယ် ခံချင် သူများဆက်သွယ်ပါ09425301542ကိုviberသုံးတယ်
Anonymous September 14, 2014 at 4:59 AM
တကယ်ပါTနော်မတင်တက်လို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တင် ခိုင်းတာပါ ကိုယ်တိုင်မတင်တက်လို့ပါဗျာ 09425301542ဆက်သွယ်ပါ
Anonymous September 16, 2014 at 6:34 AM
Anonymous September 16, 2014 at 9:31 PM
wechat ID woshiwo19287 ID mdy ka fri myar nae khin chin lo bar
သန်လျင်က top တယောက်နဲ့တွဲချင်ပါတယ် ဆက်သွယ်ပါ ၀၉ ၄၃၁၈၀၉၄၉
Anonymous September 24, 2014 at 3:36 PM
ရန်ကုန်ကပါ top onlyပါ
လီးစုပ် ချင် သူ များ
နေရာ ရှိသူ များသာ
Anonymous January 28, 2015 at 7:51 AM
နေရာမရှိသူများ မဆက် ရ
Anonymous January 28, 2015 at 7:59 AM
Anonymous September 25, 2014 at 2:16 PM
ဖင် ကောင်း ကောင်း လိုး ပေး မည်ခံချင် ရင် ဆက် သွယ်လို့ရမဲ့ ဖုန်းပေး ပါ။mdy က
Anonymous December 17, 2014 at 4:30 PM
I want sex you call me 09797504324
Anonymous September 25, 2014 at 2:47 PM
ခံချင်​တယ်​ ဖုန်းno​ပေးပါ viber,ကဆက်​သွယ်​လိုက်​မယ်​
Anonymous September 26, 2014 at 12:48 PM
မန်းလေးက ယောက်ကျားစစ်စစ်ဖင်ကို အားရပါးရ လိုးချင်တယ်
Anonymous September 26, 2014 at 4:46 PM
Phone no​ပေးပါ ဆက်​သွယ်​ပါ့မယ်​ ခံချင်​လွန်းလို့
Anonymous October 7, 2014 at 9:14 AM
09797158645 viberက​နေဆက်​သွယ်​ပါ needtosex ဆိုပြီး အရမ်းလိုးချင်​သည်​ တိုးတိုးတိတ်​တိ်​တ်​ပါ
Anonymous October 8, 2014 at 11:52 PM
moechit thu September 26, 2014 at 11:40 PM
Anonymous October 1, 2014 at 11:39 PM
koko October 2, 2014 at 1:25 PM
Anonymous October 4, 2014 at 9:40 PM
Sai Aungminnko October 5, 2014 at 2:36 AM
Anonymous October 2, 2014 at 9:46 PM
Sai Aungminnko October 5, 2014 at 2:50 AM
ygn295@gmailပါ top များသာaddပေးပါ
Anonymous October 9, 2014 at 7:14 AM
Anonymous October 9, 2014 at 1:54 PM
blackocean38@gmailပါ bot ပါ
Anonymous October 14, 2014 at 12:25 AM
09797451017 Top Mdy မှ ဖင်​ခံချင်​သူ ၂၀​အောက်​ ညီ​လေးများ မက်​​ဆေ့ပို့ပါ ဖုန်း​ခေါ်လျှင်​မကိုင်​ပါ
Anonymous October 11, 2014 at 3:37 AM
ပခုက္ကူက ဖင်​ခံချင်​သူများဖုန်းထားခဲ့ပါ ​နေရာရှိမှသာ ဆက်​သွယ်​မည်​ မနွဲ့ရ
Anonymous October 11, 2014 at 4:47 AM
Anonymous October 12, 2014 at 3:38 AM
Anonymous October 12, 2014 at 4:57 AM
ဘယ်ကလဲ ph ထားခဲ့လေလိုးပေးမယ်
အပေါ်မှာကို့ ph ရှိတယ်ဖင်ခံချင်ရင် viber ကနေ hi လိုက်ပါ
Anonymous October 13, 2014 at 11:52 PM
MDY မှအသက်​၂၀​အောက်​ ဖင်​ခံချင်​​သော လီးစုပ်​ချင်​​သော ညီ​လေးများ 09797451017 သို့ မက်​​ဆေ့ပို့ပါ ဖုန်း​ခေါ်လျှင်​ မကိုင်​ပါ။
If u want to havearealfriendship & amazing services then uU can reach me at 09400021660 From MYITKYINA.
I'm in 22.
Prince Shine October 16, 2014 at 1:55 AM
viber မှာ +66856163102
ygn bot များ ဆက်ပါ
Anonymous January 30, 2015 at 5:09 AM
Mdy ka par.khan chin tal 09449003505 ko set par
Anonymous October 24, 2014 at 7:11 PM
ကိုဇာနည်အကြောင်းသိတဲ့သူတွေကယုံမှာမဟုတ်ဘူး တကယ်တမ်းကြတော့ကိုဇာနည်ကျော်ကလူလိမ်မဟုတ်ဘူး သူများမကောင်းလျှောက်ပြောတဲ့မင်းကလူလိမ်ပဲဖြစ်မယ်
09254417902 ခံချင်ပါတယ် ရန်ကုန်ကပါ တခါမှမခံဘူးသေးပါ စမ်းကြည့်ချင်လို့ပါ viber မှဆက်သွယ်ပါ
wai phyo October 26, 2014 at 2:53 PM
တကယ်လား ခံမှာသေချာရင် 09975176004ကိုဆက်လိုက် ဖုန်းအမှန်နော် ရန်ကုန်ကပဲ လိုးချင်နေတယ်
Anonymous October 25, 2014 at 2:20 PM
Anonymous October 29, 2014 at 9:27 AM
ငါကလဲဖင်ပေါက်ပါရင်ပြီးရောဆိုပြီးလိုးတဲ့လူးစားထဲမှာမပါဘူး မင်းသိပါတယ် မင်းကိုမလိုးပေးတာကိုပဲကြည့်ဟားဟားဟား
Anonymous October 25, 2014 at 3:03 PM
ygn ကပါ top အလိုရှိသည်။အပြုအစုကောင်းသည်။ 0931050230
wai phyo October 26, 2014 at 2:59 PM
ငါလဲရန်ကုန်ကပဲ အပြုစုကောင်းရင်တွေ့ချင်တယ် ငါ့ဖုန်းကိုဆက်လိုက် 09975176004
​နေပြညိ​တော်​ က bott 09254927752
Anonymous November 4, 2014 at 10:23 AM
09797689187 Top လိုးချင်တယ်
DD November 8, 2014 at 4:30 AM
Anonymous November 11, 2014 at 2:16 PM
Anonymous November 16, 2014 at 8:59 AM
adiba akter November 18, 2014 at 9:59 AM
Anonymous November 19, 2014 at 10:46 PM
ကျောက်မြောင်းကပါ သူငယ်ချင်း တစ်ယောကိအလိုရှိပါတယ်
aungkominthu aung December 6, 2014 at 10:33 AM
Anonymous December 9, 2014 at 9:58 PM
ph.no ပေးခဲ့လေ ဆက်သွယ်လိုက်မယ် နွဲ့ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျ top စစ်စစ်မှ ကျနော်လည်းမနွဲ့ဘူး
Anonymous November 27, 2014 at 8:58 AM
Anonymous November 28, 2014 at 10:13 PM
Anonymous December 2, 2014 at 9:27 PM
hello fri mx.12.kmx@gmail.com
is me welcome all friends.
Baby Millo December 9, 2014 at 5:35 AM
homo ချစ်သူလိုချင်သည် top /ver ရန်ကုန်ကပါ 09400444435/09799611009/09973567565
Anonymous December 13, 2014 at 6:30 AM
what is top, button
ကိုထက် December 14, 2014 at 4:31 PM
Anonymous December 17, 2014 at 6:45 AM
BOT ONLY ပါ
Anonymous December 17, 2014 at 9:32 PM
စစ်ကိုင်းကခံချင်ပါတယ် top manly တစ်ယောက် လိုချင်ပါတယ်တည်းခိုခန်းခဘီယာစိုက်ပါမည်
Anonymous December 21, 2014 at 1:12 AM
Anonymous December 18, 2014 at 3:56 AM
Than Zaw Oo December 25, 2014 at 9:19 PM
နေပြည်တော်ကပါ ဖုန်း 09 8306767 ကို ဆက်သွယ်ပါ အဆင်ပြေချင်လို့ပါ Copy and
royallover22 December 28, 2014 at 7:52 AM
hi phin loe chin tal
Anonymous December 31, 2014 at 6:11 PM
တောင်ကြီးကပါ အသက် ၄၀ ပါ နဲနဲ ဝပါတယ် တောင်ကြီးက အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် bot တစ်ယောက်လောက်
တောင်ကြီးကပါ အသက် ၄၀ ပါ နဲနဲ ဝပါတယ် တောင်ကြီးက အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် မိန်းမဆန်ဆန်ချောတဲ့ bot တစ်ယောက်လောက်
royallover22 January 1, 2015 at 7:11 AM
Iron Dragon January 1, 2015 at 12:15 PM
ပခုက္ကူကခံချင်​ရင်​ဖုန်းထားခဲ့ပါ ​နေရာရှိရမည်​ အလကားလိုး​ပေးမည်​
Anonymous January 15, 2015 at 11:19 AM
ခံချင်တဲ့သူများ၀၉၄၆၄၆၀၅၂၈ကိုဆက်သွားပါ မှတ်ချက်ရန်ကုန်bottomများအတွတ်
Anonymous January 19, 2015 at 11:08 AM
ygn က bot ပါ။ ခံချင်ပါတယ်။အသက် 20 မှ 30 ကြားဖြစ်ရပါမယ်။အဆင်ပြေရင် bonus ပေးမယ်။0931050230
Anonymous January 20, 2015 at 2:31 AM
Anonymous January 28, 2015 at 7:44 AM
Anonymous February 5, 2015 at 6:24 PM
09425301542 Top နေပြည်တော်နှင့်တပ်ကုန်းမြို့မှခံချင်သူများဆက်သွယ်ပါ
Anonymous February 6, 2015 at 12:53 AM
Anonymous February 15, 2015 at 9:45 PM
ဖင်ခံချင်တယ် မခံဖူးလို့ ပါ ရှိန်းမောင်မောင် 09797216774
Phyo Ko February 19, 2015 at 5:33 AM
thuyamin February 24, 2015 at 7:06 AM
ဆက်သွယ်လိုက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မနွဲ့ဘူးဘယ်အချိန်ခေါ်ခေါ်ပါနေရာရှိရင်လာမယ်မနွဲ့နဲ့မကြိုက်ဘူး ၀၉၄၀၁၆၀၃၃၃၆ Gmail..thuyamin012 @နော်ဆက်သွယ်ပါ
thuyamin February 24, 2015 at 7:07 AM